ခု ရက် ထဲ..မေတ္တာ နဲ့ ကြော်ငြာ ပေးချင် တာလေး တွေ..စု ဆုံ လာ လို့ ပါ။
အိပ်မက် တွေ ကို အကောင် အထည် ဖော်သူ
ပထမ ဆုံး ကတော့..ကျမ တို့ ရဲ့.. ဘူမိ အကိုကြီး တယောက် ဖြစ်တဲ့.. ကိုအောင်ခိုင် ( မင်းအောင်ခိုင် ) ရဲ့..ဗွီစီဒီ ကာရာ အိုကေ အသစ် ပါ။
သူ ပထမဆုံး အခွေ ထုတ် မယ် ဆိုတော့..ကျမ တို့ မအံ့သြ ကြပါဘူး။ ဘာလို့ ဆို.. သူ သီချင်းဆို ကောင်းတာ.. ၀ါသနာ ကြီး တာ ကို.. အစောကြီး ကတည်း က..သိနေ ပြီးသား မို့. ..တကယ် ဖြစ်လာ ပြီ ပေါ့ လို့သာ..၀မ်းသာ အားရ နဲ့ ချီးကျူး သြဘာ ပေး မိ ကြ တယ်။
ကျမ တို့ ထက်.. ဆယ်စု တ ခု လောက် စော ပြီး ကျောင်းပြီး ခဲ့ ပေ မဲ့..ထုံးစံ အတိုင်း စလုံး ကျွန်း မှာ..စု မိ ဆုံ မိ .. အလုပ် အတူတူ လုပ် ကြ ရင်း..ရွယ်တူ တွေ လို ခင်မင် ရင်း နှီး ခဲ့ ကြ ဖူးတယ်။ အလုပ် မှာ..ကျမ အမျိုးသား လည်း အတူတူ မို့.. ကျမ တို့ နှစ်ယောက် လုံး နဲ့ .. မောင်ညီမ အရင်း တွေ လို ပါပဲ။ ကျမ နဲ့ ဆိုရင်တော့.. မြန်မာ သံစဉ် တွေကို ချစ် ခင် သူခြင်း.. စာရေး စာဖတ် ၀ါသနာ ပါ ကြ တာ ခြင်း... အဲဒီ တုန်းက ရုံးက..ဘော့စ် ကို မုန်းကြ တာ ခြင်း အတူတူ မို့.. နေ့လည် ထမင်းစား ချိန် တွေ..စကား ကောင်းကြ.. ။ မ၀ သေး ရင်.. စားပွဲ ချင်း ကပ်လျက်..အလုပ် မှာ.. ခိုးပြီး ဗမာ လို စကား များ ကြ နဲ့.. တော်တော် ပျော် ဖို့ ကောင်း ခဲ့ ပါတယ်။
သူက.. မြန်မာ့ အသံ မှာ လည်း တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ ဖူး သူ ဆိုတော့.. တချို့.. အနုပညာ အတွင်းသတင်း လေး တွေ လည်း..သူ့ဆီက..နားထောင် ရ တယ်လေ။
အဲဒီ တုန်းက.. ကျမ လို ငချွတ်တား လေး က.. သူ ပြော တဲ့.. တေးရေး ကိုသက်ဦး ဆိုတာ မျိုး တွေ လည်း သိ..၊ သန်းသန်းဆင့် သီချင်း တွေ လည်း.. အလွတ် ရ ဆိုတော့.. သူ က လည်း အံ့သြတကြီး ဖြစ် ရှာတယ်။ တကယ်တော့ လည်း ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး မိ သ လောက် ပါ။ အများကြီး လည်း သူတို့ နဲ့ လိုက်မမီ နိုင် ပါဘူး။
အဲဒီ လို..ဗမာ ဂီတ သံစဉ် တွေကို နှံ့စပ် တဲ့ လူ တယောက် ပါ။
အနုပညာ ကို ဘယ်လောက် ရူးသွပ် သလည်း ဆို.. အိမ်မက် တွေကို.. အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ ကြိုးစားတာ..ဒါ ပထမ ဆုံး အကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုး စလုံးကျွန်းကို..ကျမ တို့ မရောက်ခင်.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ် ၁၈ နှစ် လောက် ..ဗမာတွေ အတွက်..အ၀င်ခက်..အလုပ်ခက်..စတေး ခက် တဲ့ အချိန်ကာလ တွေ ကတည်းက.. စင်ကာပူ က.. ဗမာ တွေ ရုန်းကန် ခက်ခဲ ပုံ တွေ ကို..အချစ် နောက်ခံ ထား ပြီး ဘ၀ သရုပ်ဖော် ရုပ်ရှင် လေး.. တကား လည်း..ရိုက်ကူး ခဲ့ ဖူး ပါ သေးတယ်။ အဲဒီ တုန်းက.. ကိုယ်ပိုင် ဗွီဒီယို ကင်မရာ လေး တလုံး နဲ့ ပဲ.. တရုံး တည်း သား တွေ.. ကို.. ချော့မော့ စု ဆောင်း ပြီး.. စနေ နေ့တ၀က် ကလေး မှာ.. ကြိုးစား ၇ိုက်ကူး ခဲ့ တာပါ။ အဲဒီ တုန်းက ဆို..မိန်းကလေး တွေ ခု လို တောင် မများ လို့.. ခင်ရာ မင်ရာ အဆင့် ဆင့် နဲ့.. မင်းသမီး ရှာ ရ သေးတယ်။ မင်းသား လုပ် တဲ့.. အကိုကြီး..(သူလည်း ဘူမိ ကပဲ ) ဆို.. ကိုမင်းသား ဆို တဲ့ နာမည် တောင် တွင်ကျန် ခဲ့ ပါ ရော..။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်း တို လေး ကို..သူ့လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် အဆက်အစပ် တွေ နဲ့.. မြန်မာ့ ရုပ်သံ မှာ ပြ ဖို့ လည်း ကြိုးစား ခဲ့ သေး တယ် လို့ ဆို တယ်။
နောက်ပိုင်း..ကျမ တို့ စလုံးက.. ထွက်လာ တော့.. ဆရာ ဦးခင်မောင်လတ် ထုတ် တဲ့.. ရွှေမြန်မာ ဂျာနယ် မှာ.. အယ်ဒီတာ အဖြစ် ၀ိုင်းနေ ၀န်းနေ တယ် ဆို တာ ကြားမိ တော့ လည်း.. မအံ့သြ မိ တော့ဘူး။ စာပေ အနုပညာ ၀ါသနာ ကြီး တဲ့ သူ ဟာ... ဘယ်နေရာ ရောက် ရောက် သူ့အစွမ်းအစ ကို.. အလကား မထားပဲ.. သွေး နေ မှာပဲ လေ..။
မေးလ် ကနေ ပို့ပေး လာ တဲ့.. MRTV4.. နမူနာ ဖိုင်ကို.. အိမ်မှာ ဖွင့် ကြည့် ရင်း.. ကျမ တို့ ၂ ယောက်သား.. ခေါင်းတညိတ် ညိတ် နဲ့ ..ဘာမှ မပြော နိုင် အောင် ပါပဲ။
ကျမ ကတော့..အိမ်မက် တွေ ကို..အကောင် အထည် ဖော် တတ် ဖို့..ကိုအောင်ခိုင့် ဆီ မှာ..အတုယူ ရ အုံး မယ် လို့ သာ တွေး နေ မိ တော့ တယ်။
ဘယ်တော့ မှ မနား အအား မနေ သူ
နောက် တယောက် ကတော့.. ကျမ တခါ မှ မပြောပြ ဖူး တဲ့..ကျမ ရဲ့..မာမီ ပါ။ ကျမ အမျိုးသား ရဲ့..ချစ်လှ စွာ သော မိခင် ပေါ့။
ကျောင်းဆရာမ တယောက် လုပ် ခဲ့ ဖူး ပြီး..နောက်ပိုင်း တော့.. သူ့ခင်ပွန်း ရဲ့ လုပ်ငန်း တွေ မှာ ၀င်ကူ.. သားသမီး တွေ အတွက်..စီးပွားရေး ကို.. ဦးဆောင် မောင်းနှင် ခဲ့သူ ပါ။
နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး ဆက် မလုပ် ဖြစ် တော့ လည်း..သူ့ ကိုယ်သူ ဘယ်တော့မှ အအား မထား.. တနေ ရာ ရာ သွား ရင် သွား...တခုခု လုပ်ရင် လုပ်နေ ရ မှ.. နေပျော်သူ။ တယောက်ယောက် ကို ကူညီ နေ ရ မှ.. ကျေနပ် သူ ။ ဘုရားကျောင်း မှာ.. ပန်းထိုး ပေး တယ်။ ကလေး တွေကို စန္ဒယား တီး လိုက်သင် ပေး တယ်။ YWCA မှာ လုပ်သမျှ..အမျိုးသမီး သင်တန်း တွေ တက် တယ်။ ကျမ်းစာ ဆွေးနွေး ပွဲ တွေ အပတ် တိုင်း သွား နားထောင် တယ်။ အဲ့ဒီလို မျိုး။ သူ့ သမီး က ..သူ့ကို ( အပျော်ထမ်း ) လို့ ချစ်စနိုး နဲ့ နောက် ပြီး ခေါ် လေ့ ရှိတယ်။ စန္ဒယား ကို တောင်.. Kit Young ဆီ မှာ.. ထပ် ပြီး ဆည်းပူး သေး သူ..။ ပြော သေးတယ်.. သူ တီးတာ က..လက်ကွက် ကလေး က.. မတူ ဘူး .. ဒီလို..ဒီလိုလေး ဆို ပြီး လုပ်တောင် ပြ လိုက် သေး တယ်။
တခါ တလေ လည်း သူ့ ရဲ့.. ရိုးသား ပြီး ..ဘာမှန်း ညာမှန်း မသိ စွတ် ပြီး..ကူညီ သင်ပြ ချင် တဲ့..စေ တနာ က.. ကျမ တို့ အတွက်.. ရီစရာ..ချစ်စရာ လည်း ဖြစ် နေ ပြန် တယ်။
တခါ က ဆို.. ရန်ကုန်က ကျမ အမအိမ် ကို လာ လည် ရင်း.. ဘာမပြော ညာမပြော.. ပန်းထိုး နည်း ပြ ပေး မယ် ဆို ပြီး..နောက်ဖေး မီးဖိုချောင် စားပွဲ ပေါ်က..ဟင်းချက် မလို့ လုပ် နေ တဲ့..ဘူးသီး ကြီးကို.. ထက်ပိုင်း ပိုင်း ပြီး..နှီး တွေကို ဆူး လုပ် စိုက်.. လက်တွေ့ သရုပ် ပြ လိုက်တာ.. အဲဒီ နေ့..ကြက်သား နဲ့ ဘူးသီး ဟင်း မစား လိုက် ရ တော့ တဲ့ အကြောင်း ညီအမ တွေ..ဖုန်းဆက်ရင်း ရီ မော ခဲ့ ကြ ရ ဖူး တယ်။ အဲဒီ လို.. လက်တွေ့ ကျ..လွယ်ကူ တဲ့.. အိမ်တွင်း ပန်းထိုး နည်း တွေ အကြောင်း လည်း စာအုပ် ကလေး တအုပ် ပြုစု ပြီး.. ထုတ် ခဲ့ သေးတယ်။
YWCA လို အမျိုးသမီး သင်တန်း တွေ မှာ အသုံး ၀င် တဲ့ သူ့စာ အုပ် ကလေးက.. ခဏခဏ တော့.. ထပ်ပြီးပုံနှိပ် ရ လေ့ ရှိ တယ်။ သူ့ရဲ့ခင်ပွန်း ( ဒယ်ဒီ ) က လည်း ..ချစ်စနိုး နဲ့.. မင်းစာအုပ်က.. best seller ဖြစ်နေ ပြီ လို့.. အမြဲ စ ပါတယ်။
ပြီးတဲ့ ဧပရယ်လ ထဲ မှာ.. ခင်ပွန်း ဆုံး သွား တော့.. တယောက် တည်း ကျန် ခဲ့ တဲ့.. မာမီ တယောက်.. မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ် အောင် ပိုပြီး တော့ ကို..အအား မနေ တော့ ဘူး။
နောက်ထပ် စာအုပ် တအုပ် ဖြစ် တဲ့..ပန်းခြောက် အနုပညာ နည်း တွေ ကို ဆက် ထုတ် ဖို့ လုပ် တော့ တယ်။ အတော် စော စော ကတည်းက.. ဘုရားကျောင်းက..မိန်းကလေး တွေ ကို..ပန်းခြောက် ပို့စကဒ် လုပ်နည်း.. စာအုပ်ညှပ် လုပ်နည်း တွေ..သူ သင်ပေး ရင်း ပျော်ရွှင် တက်ကြွ နေတာ ..သိ နေ တာ မို့..သူ့ အမေ ကို အင်မတန် ချစ်တဲ့ သား ကလည်း.. ပန်းခြောက် လုပ်နည်း စာအုပ် တွေ... ၀ယ် ၀ယ် ပို့ပေး ထား တာ ရှိတယ် လေ..။ ခု တော့..သူ့ ရဲ့ ဒုတိယ စာအုပ် ကလေး ဖြစ်တဲ့..ပန်းခြောက် အနုပညာ စာအုပ် ကလေး .. စာပေလောက ဆိုင် ရဲ့ ..စင် ပေါ် ရောက် နေ ပြီ လို့ ပြော တယ်။ မိုးမိုး(အင်းလျား) ရဲ့ အင်းလျား သူငယ်ချင်း ဖြစ် တဲ့.. မားမီ ကို စာပေလောက ကလည်း အမြဲ ကူညီ ပါတယ်။
မားမီ ရဲ့.. ၀ါသနာ တွေ အလုပ် တွေ အတွက်..ကျမ ဘာမှ ထိထိ ရောက်ရောက် မကူ ညီ နိုင် ခဲ့ ပေ မဲ့..၊ အဲဒီ စာအုပ် ရဲ့ အဖုံး လေး က တော့.. ကျမ ရဲ့.. လက်ဆောင် အဖြစ်.. အမြဲ အမှတ် တရ ဖြစ် နေ တော့ မှာ ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်.. အဲဒီ တောရိုင်းပန်းခြောက် ကလေး တွေက..ကျမ ရဲ့ လက်နဲ့ ခူး ခဲ့ တဲ့ ပန်းကလေး တွေ ပါ။
၂၀၀၉ မှာ.. ကျမ တို့ နှစ်ယောက်ဆွစ်ဇာလန် ..ဒါဗို့စ် ကို ရောက် တော့.. ဒီဘလော့ ရဲ့ ဘန်နာ ထဲ မှာ မြင်ရ တဲ့ .. ဆွစ်စ် တောင်တန်း ကြီး တွေ ပေါ် မှာ... တောပန်း တွေ ခဲခဲ လှုပ် အောင် ပွင့် နေ ခဲ့ တယ် လေ..။ ကျမ ကလည်း..တောပန်း အရူး မို့.. ရောက်ခဲ လှ တဲ့.. ဒါဗို့စ် တောင်တန်း ကြီး တွေ ပေါ် က.. တောပန်း ကလေး တွေ ကို.. တပွင့် ခြင်း..တမျိုးခြင်း.. တရောင် ခြင်း.. ခူး ပြီး.. ယူ လာ ခဲ့ တယ်။ ပန်း တွေ ကလည်း အဲဒီ တောင်ပတ် လမ်း တလျှောက် လုံးမှာ.... အမျိုးစုံ..အရောင်စုံ ကို..ပွင့် နေ ခဲ့ ကြ တာ ပါ။ စိတ် ထင်..အမျိုး ပေါင်း ၅၀ နီးပါး ရှိ ခဲ့ လိမ့် မယ်။ အဲဒီ တုန်း ကတော့.. ဘေး မှာ ပါ တဲ့..သူက.. လျှောက်ခူး ပြီး..ဘာလုပ် မှာ တုန်း.. သယ် လို့ လည်း မရ ပဲ နဲ့ လို့ ပြောသေး တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ.. ။ ပန်းခြောက်..သစ်သီး..သစ်သား ထွက် ပစ္စည်း ဆို တာ တွေ ကို.. သြစတြေလျ က.. လေဆိပ် မှာ.. တားမြစ် ထား သလို..အပြန် ခဏ ၀င်မဲ့ လန်ဒန် ကလည်း.. လက်မခံ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့..ဘယ် ရ မလည်း..။ ဟိုတယ် ပြန် ရောက်တော့.. အဲဒီ ပန်း လေး တွေ ကို..ဟိုတယ် ခန်း ထဲက.. ဖုန်းနံပတ် စာအုပ် ထူထူ ကြီး ထဲ မှာ ညှပ်.. ၊ အပေါ်က.. စားပွဲ နဲ့ ဖိ.. ၊ နောက် ၃ ရက် နေ.. ဒါဗို့စ် က..ပြန် တော့ မှ.. ကိုယ့်ရဲ့ စာအုပ် ကလေး ထဲ ကို ပြောင်း ညှပ် ပြီး.. လေဆိပ် ၂ ခု လုံး ဖြတ်ပြီး ခိုးသယ် လာ တာ.. အိမ် ကို ဒုတ်ဒုတ် ထိ ရောက် ရော ပဲ။ အဲ..ဒုတ်ဒုတ် က.. မထိ သေး ဘူး။ အဲဒီ ပန်း တွေ ကို..အိမ် ရောက် တော့.. ပို့စ်ကဒ် တွေ သုံး လေး ခု ခွဲ ပြီး အထဲ မှာ ညှပ် .. ၊ ရန်ကုန် ကို စာတိုက် ကနေ.. ပို့ လိုက် ပါရော..။ အဲဒီ လို နဲ့.. ယောက္ခမ ရိုသေ အသက်ရှည် ပြီး.. ဒီလို စာအုပ် အဖုံး လေး ဖြစ်လာ တော့ တာ ပါပဲ။
လောလော ဆယ် ဆယ် တော့.. စာအုပ် လည်း ပြီး သွား တဲ့ မာမီ တယောက် နောက်ထပ် လုပ်စရာ ရှာ ရင်း.. အကြိုက်တွေ့ သွား တာ ကတော့...နယ်မှာ ကျန် ခဲ့ တဲ့..ဘိုးဘွား ပိုင် အိမ်ကြီး ကို..သာသနာ ကိစ္စ အတွက် ပြင်ဆင် မွမ်းမံ မလို့ ဆိုပဲ..။ သူ့အမေ ဘာလုပ်လုပ်.. ထောက်ပံ့ အားပေး တဲ့.. သူ့သား ကို ကြည့် ပြီး...ကျမ ကတော့.. မျက်ခုံး ခပ်လှုပ် လှုပ်..။း))
ဘလော့ဂါ တို့ ရဲ့ အလှူ
နောက်ဆုံး ၀င်ချင် တဲ့ ကြော်ငြာ ကတော့.. ကြည်နူး သာဓု ခေါ် စရာ ပါ။
ကျမ တို့ ဘလော့ဂါ တွေ.. face book page တခု ကနေ စုစည်း ပြီး.. မြန်မာပြည် ထဲ မှာ လက်ငင်း ကြုံတွေ့ နေ ရ တဲ့.. ပခုက္ကူ ရေဘေး အတွက်.. တယောက် တလက်.. ၀ိုင်း စု လိုက် ကြတာ..အခု ည.. နောက်ဆုံး သတင်း အရ.. စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကျော်သွား ပြီ လို့ သိ ရ ပါတယ်။
အဲဒီ အကြံ ကို.. ရွာဆော် လုပ် ခဲ့ တဲ့..ကလူသစ် .၊ အကောင်အထည် ဖော် ပေး ခဲ့ တဲ့ မသက်ဝေ..နဲ့..မချစ်ကြည်အေး..၊ ဘေးကနေ.. ညာသံ ပေး ခဲ့ တဲ့.... ဇူလိုင်အိမ်မက်..ကိုအောင် နဲ့ တကွ.. ထဲ့ဝင် ကုသိုလ် ယူ ကြ တဲ့.. ဘလော့ဂါ အပေါင်း.. ယခု ဘ၀ မှာပင် ကုသိုလ် များ ခညောင်း ၍..စာကောင်း များ တိုး ၍ ရေးသား နိုင် ကြ စေ ကြောင်း..။
မသက်ဝေ ရေး တဲ့ အလှူ မှတ်တမ်း
Scenery of Switzerland(1)
Labels: Blogging , Family , friends , personal
မေတ္တာကြော်ငြာ သုံးခုစလုံး ဖတ်ပြီး ကြည်နူးမိတယ်... ကိုယ့်အဖွဲ့လေးရဲ့ ကြော်ငြာကတော့ စိတ်ထဲ ဝမ်းသာ ကြည်နူးပြီး ပီတိအဖြစ်ဆုံးပါပဲ...
ကျမ အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကို တွေ့တော့ အရမ်းဝမ်းသာသွားပြီး ဝယ်လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ မောင်လေးက သူ့ပေးပါဆိုလို့ ထားခဲ့ရတယ်။ ဒီတခေါက်ပြန်ရင်တော့ ထပ်ဝယ်ရအုန်းမယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတာတွေက လိုက်လုပ်ရလွယ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်း ရေးထားပေးတယ်။ စာအုပ်စတွေ့တော့ တောင်ငူကဆိုလို့ ဝယ်ဖို့ပိုသေချာသွားခဲ့တာ။ ကျမလည်း တောင်ငူကပဲမို့လေ။
Thanks for All, I love some of Ko Aung khine asacommon listener.
Not concern here, I prefer Ringo on his original voice in duo with Si Thu Lwin in which Ringo's performance is free and natural.
ကေ့မာမီက ပါရမီရှင်ပါလားကေရေ...။ တို့လည်း ပန်းထိုးဝါသနာပါတယ် သိလား။ ကိုအောင်ခိုင့် အခွေမိတ်ဆက် ဒီမှာလုပ်တော့ သွားခဲ့သေးတယ်။ အခွေလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပိုစ့်တင်မယ် တင်မယ်နဲ့ မအားတာနဲ့ပဲ...။ ရေဘေးအလှူကတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရပါပဲ... :))